Imveliso yefektri yoLuntu lwase China kunye nabaxhasi | qiangjing
Isilungisi sokumiswa senziwe kwaye saphuhliswa ngokuthe ngqo yinkampani yokuzingela nokuhamba nokugoba abantu okubangelwa zizinto ezibi abazenzayo. Ingayilungisa i-hunchback, isifuba, isifuba, iintlungu zangasemva kunye nentlungu; lungisa ukuhlala ngendlela embi, ukuma ukuma kunye nentlungu yomlomo wesibeleko okubangelwa kukuhlala ixesha elide.
Ukuhlala ngokungahambi kakuhle kubangela ifuthe emzimbeni wethu. Kubomi bemihla ngemihla kunye nomsebenzi, kufuneka sinikele ingqalelo ngakumbi kuyo. Umzimba osempilweni, nceda ugcine imeko efanelekileyo yokuhlala. Mhlawumbi ungayihoyanga iinkcukacha ezincinci kubomi bakho bemihla ngemihla. Intlungu ebomini bonke, ukuhlala phantsi okungalunganga kwabafundi ayisiyonto incinci, kwaye kufanelekile ukuba kuthathelwe ingqalelo ngootitshala nabazali!
Ngokwengxelo zosasazo zakutsha nje, ngaphezu kwe-100 lezigulana ezinengxaki yokuqaqanjelwa ngumgogodla zingeniswe kwiindawo zokufakelwa iziko lokuhlaziya ezinxibelelene neDyunivesithi yabakhubazekileyo yaseTshayina. Phakathi kwaba baguli, iimeko ezinzulu kufuneka zilungiswe ngokuhlinzwa.
Kunzima ukwenza utyando lokulungisa umgogodla, kuba kukho umsipha wesiponji kumzimba wesintu. Umsebenzi wale nerve yomgogodla unzima kakhulu. Ukuba utyando kukukhathalela okuncinci, kunokubangela ukukhubazeka okukhulu, njengesiphumo.
Ukonakaliswa kokuqina komgogodla ebantwini akuchaphazeli imbonakalo kuphela, kodwa kukwaxinzelela intliziyo kunye nemiphunga, kuchaphazela ukusebenza kwentliziyo kunye nemiphunga, kwaye kunciphise nexesha lobomi.
Ngokukodwa ulutsha olunengxaki yokuqina komqolo luya kuchaphazela ngqo ukukhula kunye nophuhliso. Ukomelela komgogodla ngokuthe ngcembe kuyenziwa kancinci ngenxa yokuhlala ixesha elide, njengokugoba ngasemva kwencwadi ukuze ufunde kwaye ubhale, kunye nokulala kunye nokulala phantsi ukubukela umabonwakude. Oku kubonisa ukuba ukuthintela ukuqina komgogodla, ukuthintela kubaluleke kakhulu. Abazali kufuneka basoloko befundisa, bejongile, kwaye belungisa ukuhlala komntwana, kwaye bangavumeli umntwana ukuba aguqukele phezulu ukuze afunde ukubhala, kwaye alale ebhedini ngelixa ebukele umabonwakude. Xa uthatha umntwana wakho ngamanzi okuhlamba, kuya kufuneka ujonge umgogodla womntwana wakho nge-scoliosis. Ukuba ufumanisa ingxaki, yiphathe ngexesha.
Ngaphambi kobudala beminyaka eli-16, ithambo lomntu alikabumbeki ngokupheleleyo. Abo banesifo sokuqaqanjelwa ngumgogodla basenokulungiswa ngokwenza umthambo kunye nokunxiba ii-orthotic; Ukuba bangaphezulu kweminyaka eli-16 ubudala, ithambo lomntu liyelenziwe kwaye linokulungiswa ngokuhlinzwa kuphela.
Inqaku lokulungisa isimo sokuziphatha
Ngaba unayo ugqirha wakho? Zeziphi izinto ogqirha wakho onoxanduva kuzo?
Umcebisi wethu wezempilo unesikhumbuzo esihle kuye wonke umntu:
Yeyiphi imiphumo emibi yokuhlala ngokungafanelekanga?
Ukuqunjelwa, ukuqubuka komzimba ngokungekho mthethweni, njengokugoba ngaphezulu nokuzingela ngaphezulu, kuya kuxinzelela amalungu angaphakathi, kuchaphazele ukuhamba kwegazi, ukunciphisa ukugaya esiswini, kwaye kukhokelela ekuqunjelweni. Iityhefu ziyaziqokelela emzimbeni kwaye azinakupheliswa ngexesha. Zinokubangela nokuba amabala ajikeleze iikona zomlomo.
Izandla kunye neenyawo ezibandayo
Umgogodla awuxhasi kuphela ubunzima bomzimba wangaphezulu, kodwa kunye nomjikelo we-autonomic nerve. Ukuba isigxina asichanekanga, ngokuhamba kwexesha, siya kuyicinezela imithambo-luvo ezimileyo, ekhokelela kukuphazamiseka, iimpawu ezinjengezandla ezibandayo kunye neenyawo, ukuqaqanjelwa sisisu, intloko ebuhlungu kunye nokudinwa okulula.
Ukusebenza ixesha elide kunye nokuzingela okanye ukuphakamisa i-chin, ukusebenza kwi-Intanethi, njl njl., Kuya kwenza umongo ube kwimeko egobileyo, eya kuthi icinezele idayagramu yomzimba, eya kwenza ukuphefumla okungabinangqondo, nengqondo Yiba hypoxic ixesha elide. Isiyezi, ukugula okushukumayo, njl.
I-Bent ngaphezulu kwe-hunchback iya kukhokelela ekujikelezweni kwe-lymphatic emnyama nakwezinye iindawo, eya kuthi ithintele ukuvela kwenkunkuma ye-metabolic, ukunciphisa ukusebenza kwemetabolism, kukhokelela ekuqokeleleni inqatha lomzimba, abantu baya kufumana ubunzima. Ubuso obu-Puffy
Abantu abanesimo esingesihle ngokufuthi banobuthathaka bemisipha okanye lukhuni, kwaye izihlunu zobuso zilula ukuphumla, zibenze babonakale bekrwada.
Ukuthunyelwa okungalunganga njengokufakelwa kwentamo kuya kuchaphazela umsebenzi we-chin kunye nokuhamba kwegazi, kwaye kukhokelela ngokulula ekuqokeleleni kwenkunkuma ye-metabolic ejikeleze i-chin, yakha i-chin kabini.
I-Myopia, ukukhula kwamathambo
Ingozi ye-myopia kufuneka icace kuye wonke umntu, kwaye abantu abaninzi abazi nge-scoliosis. Ngapha koko, imeko ye-scoliosis kulutsha ayigungqi.
I-Scoliosis inokubangela ukungabonakali komzimba kwaye ichaphazele ubuhle. Ukukhula kwabantwana kunye nokuphakama kuya kuthintelwa. Kuya kubakho iimpawu zentlungu ephantsi yasemva, ukusebenza kwentliziyo okungaqhelekanga, kunye nokucinezelwa okukhulu kwentliziyo, okubangela ukuba ube nobuthathaka, ubuthathaka kunye nokuhamba kumalungu asezantsi. Ukuphazamiseka. Ngaphandle kwezizathu ezibangelwa sesi sifo, ukuhlala ixesha elingalunganga kuhlala kungoyena nobangela.
Ngaba isetyenziselwa ukuphakamisa imilenze ka-Erlang ngokungazi? Esi sigxina siyakuthintela ukuhamba kwegazi lomlenze omnye, kwaye ubunzima bomzimba ongaphezulu buya kuxinzelelwa emlenzeni omnye. Ixesha elide, iya kubangela iziphumo ze-scoliosis kwaye ikhokelele kwi-malvormation ye-pelvic.
Okulandelayo: Inkxaso ye-Ankle